My Story – Ck4Ubuntu
July 1, 2013 chitkoko	Leaveacomment My Story
Hello everyone, Guys, could you steer me in the right direction as to using this apology phrase: Sorry for the inconvenience! Sorry for the Time when you spend in my site.Thanks for helping us Ko Ko Ye .
Tags: sorry	|
January 1, 2013 chitkoko	Leaveacomment My Story
ကျွန်တော်တို့ ညီ ၊အစ်ကို ၊အစ်မ များ နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာချမ်းသာ ကြ စေ ဖို့ မင်္ဂလာရှိ စွာဖြင့် နှုတ်ခွန်း ဆက် လိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့ ဟာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ မဟုတ်ပင် မယ့် မွေးချင်းများပမာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကူညီ ယင်း လူတွေ သိပ်ကြောက် ကြတဲ့ ၂၀၁၂ ကို အ တွေးအ ခေါ်တွေ ၊ နည်းပညာတွေ ၊ အကြံဉာဏ် ကောင်းတွေကို ေ၀ မျှယင်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ ကြပါပြီ၊ ၂၀၁၂ မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဟာ ခရီးတွေအတူသွား ၊ မုန့်တွေအတူစား ၊ ကော်ဖီအတူသောက် ၊ အတင်းတွေပြော (လဘနွန်) ၊ ကြယင်း ညီအစ်ကိုတွေထက်ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့် နောက်ပြောင် ပြောဆိုခဲ့ ကြပါတယ်။ အစ်ကို တစ်ယောက်နေရာက နေ အမြဲ ဆိုလိုတာ ကိုပြောတတ်ပြီး ကျွန်တော်ဒုက္ခ ရောက် ရင် ကူညီတတ် တဲ့ ကို သိုဟိုင်း ၊ ဘာမေးမေး မငြီးမငြူ နည်းပညာ များ ရှင်းပြ ပြီး ဆံပင် စုတ်ဖွားနှင့် ကဲကဲယို ၊ ရုပ်ချောချော နဲ့ စော်ကြည်ဘဲ ကို အန်သီ ၊အန်ဒရိုက် နှင့် အလုပ် ရှုပ်နေတဲ့ ကို အင် တန်ဆာ ၊ ထမင်းမှန်မှန်မစားတဲ့ ဘုန်းဘုန်း ၊ မိန်းက လေးငေးကြည့်ရတဲ့ ကိုစီးရီးယပ်စ် ဘလိပ် ၊ စမတ်ကြပြီး သဘောကောင်း တဲ့ ကို ရဲ ကြီး ၊ နောက် ထားဝယ်သားလေး ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လဘနွန်ည ကို ဖြတ်သန်း ခဲ့ တဲ့ မိတ်ဆွေရောင်းရင်းများ အားလုံး ဒီနှစ်မှာလဲ ကျန်းမာချမ်းသာ စွာဖြင့် ၂၀၁၃ မှာအောင်မြင် မှုတွေရရှိကြပါစေ၊။
Tags: နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်း	|